DuoDuo စျေးဝယ်လှည်း DG2035 သတ္တုအသုံးအဆောင်တွန်းလှည်း Do...
360° လှည့်ပတ်ထားသော DuoDuo စျေးဝယ်လှည်း DG1026/DG1027...
လှည့်ပတ်ဘီး ၃ လုံးပါသော DuoDuo စျေးဝယ်လှည်း DG1015 နှင့်#0...
DuoDuo Folding ခရီးဆောင်အိတ် တွန်းလှည်း DX3015 ပေါ့ပါးသော အယ်လ်...
DuoDuo Folding ခရီးဆောင်အိတ် တွန်းလှည်း DX3012 Telescopi...
ဂိုဒေါင် ပလပ်ဖောင်း တွန်းလှည်း ခေါက်နိုင်သော ပလပ်ဖောင်း ထရပ်ကား ဒိုက်လီ။အလေးချိန် စွမ်းရည်- လှည့်ပတ်ဘီးများ
ပစ္စည်းနံပါတ် HC350G HC450G အဖွင့်အရွယ်အစား 28.75"x18.5"x33" 35.4"x23.6"x33.85" ခေါက်အရွယ်အစား 28.75"x18.5"x9.65" 35.4"x23.6"x11" GS အရွယ်အစား 1K2KW Φ100MM Φ125MM ပစ္စည်း သံမဏိ သံမဏိ စွမ်းဆောင်ရည် 200 KGS 400KGS အထုပ် 1PC/Carton 1PC/Carton Carton Size 740x480x120/60MM 920x620x145/60MM GW 12.6KGS 16.70KGS အမျိုးအစား ဘီး ၂ လုံး၊ Foldable wheel3ချပ်၊ ဘီးများသည် အသံတိတ်ဘီးများဖြစ်သည်။ဒီဇိုင်းကောင်းပြီး အရည်အသွေးကောင်း၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခေါက်ထား...
ပလပ်စတစ်ပလပ်ဖောင်းတွန်းလှည်း၊ ဒါက စီးပွားရေးဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး 360 ဒီဂရီ လှည့်ပတ်ဘီး2ခုနဲ့2ပိုင်းပုံသေဘီးတွေပါတဲ့၊ လက်ကိုင်ကို အလွယ်တကူ သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့အတွက် ခေါက်လို့ရတယ်၊ ပလပ်စတစ်ပြားက ပေါ့ပါးပြီး သယ်ရလွယ်ကူတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့တဲ့အခါ အထောက်အကူကောင်းတစ်ခုပါ။ထူးခြားချက်- 1. ပလပ်စတစ်ပလပ်ဖောင်းတွန်းလှည်း၊ စီးပွားရေးဒီဇိုင်း၊ ပေါ့ပါးပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း။2. အရွယ်အစား နှစ်မျိုး ရရှိနိုင်ပါသည်။3. ခိုင်ခံ့သော ရော်ဘာဘီး4ခု၊ 360 ဒီဂရီ လှည့်ပတ်ဘီး2ခု နှင့် ပုံသေ ဘီး2ခု ပါရှိပါသည်။5. ခေါက်နိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံသည်...
ခရီးဆောင်သေတ္တာ တွန်းလှည်း Hand Trucks သံ Folding ခရီးဆောင်အိတ် လက်တွန်းလှည်းများ
ပစ္စည်းနံပါတ် DX3051 အဖွင့်အရွယ်အစား 36.9x40x92.5CM ခေါက်အရွယ်အစား 36.9x6x72CM ခေါက်ပြားအရွယ်အစား 38.3x27CM NW 3.3KGS ဘီးအရွယ်အစား Φ125mm သံထည်ပစ္စည်း သံနှင့်ပလပ်စတစ် ပမာဏ 70 KGS Package 8PCS/Carton9x Carton အရည်အသွေးမြင့် 3KGS3 ခေါက်နိုင်သော အရွယ်အစား 3KGS3 ကားအရည်အသွေး ဒီတွန်းလှည်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် ပစ္စည်းက တွန်းလှည်းကို လုံလုံလောက်လောက် ခိုင်ခံ့စေတယ်။သံမဏိပြွန်နှင့် ပန်းကန်ပြားကို အမှုန့်အပေါ်ယံအဖြစ် ဆက်ဆံထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ပြီး အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်။တွန်းလှည်းက ခေါက်လို့ရတယ်...
ခရီးဆောင်သေတ္တာ တွန်းလှည်းများ လက်တင်ထရပ် အလူမီနီယမ် ခေါက်ခရီးဆောင်အိတ် လက်တွန်းလှည်းများ
ပစ္စည်းနံပါတ် DX3050 အဖွင့်အရွယ်အစား 38.3x40x97CM ခေါက်အရွယ်အစား 38.3x6x67.5CM အလူမီနီယမ်ပြားအရွယ်အစား 38.3x27CM NW 2.85KGS ဘီးအရွယ်အစား Φ125mm ရုပ်ထွက်အလူမီနီယမ်နှင့် ပလပ်စတစ် ပမာဏ 70 KGS Package အမြင့် GGS အရည်အသွေး 8PCS/Carton 8PCS/Carton ဤတွန်းလှည်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် ပစ္စည်းသည် တွန်းလှည်းကို ပေါ့ပါးစေသည်။အလွယ်တကူ ခေါက်သိမ်းနိုင်ပြီး ခေါက်ပြီးနောက် အရွယ်အစား သေးငယ်သောကြောင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပါသည်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ...
ခေါက်နိုင်သော သေးငယ်သော သံမဏိခရီးဆောင်အိတ် တွန်းလှည်း လျှပ်စစ်လက်တွန်းလှည်း
စွမ်းရည်- 25 KGS
3 အဆင့် ပေါ့ပါးသော အလူမီနီယမ် လှေကားထစ် Dolly Rolling Wheels ပါသော အိတ်ဆောင် လက်ထရပ် အဆင့် ထိုင်ခုံ
စွမ်းရည်: 80 KGS
လှေကားစွမ်းရည်: 150 KGS
အိတ်ဆောင် အလူမီနီယမ် ခေါက်ထရပ် ခရီးဆောင်အိတ်
ပစ္စည်း: အလူမီနီယမ်နှင့် ပလပ်စတစ်
DX3020 အသေးစား လက်တွန်းလှည်း ခေါက်စျေးဝယ်လှည်း
ပစ္စည်း- သံနှင့် ပလပ်စတစ်